RASMI: Juventus Oo Ku Dhawaaqday Heshiiska Laba Ciyaartoy Oo Kale, Kaddib Markii Ay Gacanta Ku Dhigeen Arthur | Laacibnet.net
RASMI: Juventus Oo Ku Dhawaaqday Heshiiska Laba Ciyaartoy Oo Kale, Kaddib Markii Ay Gacanta Ku Dhigeen Arthur
June 29, 2020 Abdiwahab Ahmed
Kooxda horyaalka waddanka Talyaaniga iska yeelatay ee Juventus ayaa shaacisay heshiisyo cusub oo ay la gaadhay labada halyey ee Gianluigi Buffon iyo Giorgio Chiellini, saacado kooban kaddib markii ay kooxdu dhamaystirtay heshiis shan sannadood ah oo ay kula soo wareegayso kubbad-sameeyaha Barcelona ee Arthur Melo.
Gianluigi Buffon oo ay da’diisu tahay 43 jir iyo Chiellini oo 36 jir ayaa qalinka ku duugay heshiisyo cusub oo min hal sano ah, waxaanay fasal ciyaareedka soo aaddan kusii sugnaan doonaan Old Lady.
Goolhaye Gianluigi Buffon oo kusii socda in horyaalkiisii tobnaad uu kula guuleysto Juventus, waxa uu hore usoo barbarreeyey rikoodhka safashada Paolo Maldini ee Serie A oo ah 647 ciyaarood, laakiin Chiellini ayaa isaguna sannad kale sii ahaan doona kabtanka kooxda.
Warbixin ay Juventus soo saartay ayaa waxay ku sheegtay in labadan ciyaartoy ay sii joogi doonaan kooxda min hal sano oo kale, waxaana lagu xusay in inkasta oo goolhayahan ruug caddaaga ah uu wali heerkiisa ugu sarreeya usoo bandhigi karayo xirfaddiisa.
Chiellini ayaa isagana ay kooxdu sheegtay inuu wali u dagaallamayo guusha, una hammuun qabo sidii uu kooxdiisa libin u gaadhsiin lahaa.
Buffon oo Talyaaniga kula guuleystay Koobkii Adduunka ee 2006, una saftay 176 kulan, waxa uu ciyaartiisii ugu horreysay ee Serie A saftay sannadkii 1995kii, laakiin koobka kaliya ee ka dhiman ee illaa hadda uu raadinayo ayaa ah Champions League oo aanu nasiib u yeelanin.